Nhau - Ndeapi mabhendi eakakurumbira CNC mapanga muna 2020
Zvishandiso zveCCC zvishandiso zvekucheka mune yekugadzira michina, inozivikanwawo sekucheka maturusi. Mupfungwa yakafara, maturusi ekucheka anosanganisira ese ekucheka maturusi uye anoshandisa hasha. Panguva imwecheteyo, "ekuverenga maturusi" anosanganisira kwete chete ekucheka mashizha, asiwo zvishongedzo zvakaita sevanobata maturusi uye vanobata maturusi. Mazuva ano, ese anoshandiswa mudzimba kana kuvaka. , Kune yakawanda nzvimbo, saka ndeapi maturusi akanaka akakosha kukurudzira? Heano mamwe anozivikanwa CNC maturusi emunhu wese
Imwe, KYOCERA Kyocera
Kyocera Co., Ltd. inotora "Kuremekedza Denga uye Kuda Vanhu" sechirevo chemagariro, "kutsvaga zvinhu uye mufaro wemweya wevashandi vese zvichipa mukufambira mberi nekusimudzira kwevanhu uye nzanga" seye bhizinesi rekambani bhizinesi. Mabhizinesi mazhinji kubva kuzvikamu, zvishandiso, michina kumasaiti network. Mune maindasitiri matatu e "ruzivo rwekutaurirana", "kuchengetedza zvakatipoteredza", uye "hupenyu hupenyu", isu tinoramba tichigadzira "matekinoroji matsva", "zvigadzirwa zvitsva" uye "misika mitsva."
Vaviri, Coromant Coromant
Sandvik Coromant yakavambwa mu1942 uye ndeyeSandvik Boka. Iyo kambani inotungamirwa muSandviken, Sweden, uye ine hombe pasi rose simende carbide blade inogadzira chirimwa kuGimo, Sweden. Sandvik Coromant ine vashandi vanopfuura zviuru zvisere pasirese, ine mahofisi anomiririra munyika dzinopfuura zana nemakumi matatu, uye ine makumi maviri nemasere ekushandira nzvimbo nenzvimbo gumi nembiri dzekushandira pasi rese. Nzvimbo ina dzekugovera dziri muNetherlands, United States, Singapore neChina dzinovimbisa kuendesa kwakarurama uye nekukurumidza kwezvigadzirwa kune vatengi.
Vatatu, LEITZ Leitz
Leitz inodyara zvikamu zvishanu kubva muzana zvekutengesa kwese mukutsvagisa nekusimudzira gore rega rega. Mhedzisiro yacho inosanganisira zvekushandisa, dhizaini, inharaunda ine hunyanzvi uye zvishandiso-zvekuchengetedza maturusi, nezvimwe. Nekuenderera kwesainzi tekinoroji, isu tinogadzira michina inogadzira zvigadzirwa kupa vashandisi nenjere dzinoshanda, dzakatipoteredza uye dzakachengeteka.
Chechina, Kennametal Kennametal
Kupayona uye hunyanzvi, husingazungunuke uye uchiteerera zvakanyanya kune zvinodiwa nevatengi ndiKennametal chimiro chisingachinjiki kubvira payakagadzwa. Kuburikidza nemakore ekutsvagisa, metallurgist Philip M. McKenna akagadzira iyo tungsten-titanium yakaomeswa carbide muna 1938, iyo yakaita budiriro huru mukucheka kugona kwesimbi mushure meiyo alloy yakashandiswa mukucheka maturusi. "Kennametal®" zvishandiso zvine kukurumidza kumhanyisa kumhanyisa uye hwakareba hupenyu, nekudaro kutyaira kusimudzira kwesimbi kugadzira kubva mukugadzira mota kuenda mundege kuenda kune ese mashini indasitiri.
Shanu, KAI Pui Yin
Beiyin-ine nhoroondo yakareba yemakore anoda kusvika zana muJapan. Zvigadzirwa zvaro zvakapatsanurwa kuita: chigero chehunyanzvi chepamusoro (chakakamurwa kuita chigero uye chigero chebvudzi), maleza (echirume neechikadzi), zvigadzirwa zverunako, zvigadzirwa zvemumba, zviyero zvekurapa, Nehunhu hwakanakisa, network yekutengesa inovhara nyika zhinji pasi rese. . Gara chimwe chikamu chemusika, uye chizivikanwe nenhamba huru yevatengi, nemakwikwi akasimba emusika. Nekuenderera mberi kwekuwedzera kwemusika weChinese, Beiyin yakatanga Shanghai Beiyin Trading Co., Ltd. muna Kubvumbi 2000, inoona nezve kusimudzira nekutengesa kwemusika weChina. Beiyin kukura nekupinda mukati zvinoita kuti ikwanise kutora midzi uye ive inoshanda mumusika weChina.
Nhanhatu, Seco gomo rakakwirira
SecoToolsAB ndeimwe yenyika ina dzakakura carbide maturusi evagadziri uye yakanyorwa paStockholm Stock Exchange muSweden. Seco Chishandiso Kambani inosanganisa R&D, kugadzirwa uye kutengesa kweakasiyana-siyana akamiswa cemented maturusi ekugadzirisa simbi. Zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri senge mota, nzvimbo yekutengesa, michina yekugadzira magetsi, zvigadzirwa, uye michina yekugadzira. Ivo vanozivikanwa pamusika wepasi rose uye vanozivikanwa sa "Mambo wekugaya".
Kambani yeWalter yakatanga kugadzira matende ekuveza simbi e carbide muna 1926. Muvambi, VaWalter, vane matekinoroji epamutemo anopfuura mazana maviri mundima iyi, uye Walter anga achizvimanikidza pabasa iri. Kurwira kusimudzira, kwaumba nhasi kwakazara huwandu hwezvigadzirwa zvemidziyo, uye ayo anonongedzera maturusi anoshandiswa zvakanyanya mumotokari, nendege uye mamwe maindasitiri ekugadzira pamwe neakasiyana ekugadzira maindasitiri maindasitiri. Walter Kambani ndeimwe yemakambani epasirose ekugadzira maturusi esimbi.